Abalambile futhi eligadulayo iminyaka quinoa utshani, sisindise abantu bebulawa indlala. Izizwe eziningi eningizimu ezifana baseMoldova, baseBulgaria futhi Gagauz, futhi namuhla Simila ku gryadochki engadini lokhu zasemazweni luscious ukuyengeza Vitamin isobho ehlobo noma afafaze eshiya isaladi noma ipuleti ushizi. Kwabaningi utshani quinoa - uhlobo isipinashi zasendle. ososayensi Modern sengqondo ngempela uzwela kuso, ngoba lesi sitshalo ayiqondakali kahle. Kodwa ekhulwini xv, ke kuchazwa ngokuningiliziwe egunyeni zo ezifana uGalen no Serapion, kule lokuqala olunyathelisiwe incwadi ethi "The Garden Wezempilo, 'uPetru Shaffer.
Kulesi quinoa ncwadi utshani imelelwa ithuluzi emangalisayo for ekwelapheni izifo ezibangelwa overcooling. Ezinsukwini ubudala abantu akazange agijimele udokotela ohlinzayo uma ukuvuvukala kanye elikhanyayo nail embhedeni. Ukuze ekwelapheni utshani zaparivat quinoa futhi lasetshenziswa endaweni obuhlungu. Futhi namhlanje, kule iVolga nemizana ugogo omdala unike iziguli eziphathwa ukugula kwesibindi, iphaphu noma esinyeni uphuze decoction ukhula eluhlaza le linesizotha. Kube khona izindaba sokuphulukiswa usebenzisa quinoa umhluzi kusukela Izilonda. Wabuye ahlanze igazi.
Njengoba isitshalo libukeka quinoa? Incazelo yalo elula. Lokhu ukhula yonyaka, ongafinyelela ukuphakama imitha elilodwa. Roma ezikhathini zasendulo yayibizwa ngokuthi "Marey" - kusukela igama elithi "omkhulu". Okuvame kakhulu esemncane - lokhu kwenza umbala obomvana oluluhlaza. Futhi ngesinye isikhathi, kuba oluhlaza okhanyayo. Nakuba ezivamile noma Pinkish namahlamvu burgundy utshani quinoa. Photo obuhambisana lesi sihloko, kuzosiza ukudala isithombe more ephelele simila.
Yidla quinoa ku ukudla noma isiphuzo kusukela zezinkambi wakhe herbal kungaba angenamkhawulo. Phela, leli isitshalo akuyona ingozi. Ayikho imali kungcono ezimweni lapho umzimba kwamiswa eziningi isikhwehlela. Lokho spoon omisiwe imbiza quinoa komunye enkomishini yamanzi abilayo, kuthathwe kathathu ngosuku, ikuvumela ukuba ubuyisele izinqubo umzimba emzimbeni, ukumisa ukuvuvukala, ndikindiki futhi baduduze nge hysterics. Sekuyisikhathi eside umama Wozani umntwana umhluzi quinoa sohudo kanye nobuhlungu emphinjeni kanye esiswini. umhluzi Ngaphandle ingasetshenziswa uhlambulule umlomo nomphimbo, intertrigo silume ukugeza izindawo ezihlala esikhumbeni.
Quinoa ukusakaza noma ikuphi ngaphandle eNyakatho Ekude. Ukuqoqa izitshalo nenjongo zokwelapha kubalulekile kusukela maphakathi no-ihlobo ekwindla. Mexico ikhula quinoa abacaphuni. Wakhe atshalwa kule ndawo njengoba isiko isinkwa. Esikhathini ukudla zisebenzisa hhayi amakhambi kuphela, kodwa futhi imbewu, esetshenziswa ukulungiselela iphalishi ubhake breads kanye nama-dessert. Growing izinhlobo zethu obomvu bacebe amaprotheni kuka oluhlaza. Asetshenziswa njengezitolo laxative for ukuqunjelwa, steamed lugcotshwa emanxebeni. Lapho hoarseness kanye ukukhanya ebandayo decoction of quinoa obomvu ekudambiseni ukuvuvukala kanye phlegm. Steamed amahlamvu njengoba omisiwe futhi fresh, khulula ngokuphelele izinhlungu rheumatism futhi aqede sifo. I pads esetshenziswe hemorrhoids belashwa. Warriors Medieval isetshenziswa ukopha izilonda amahlamvu fresh quinoa.
Amaqiniso ethakazelisayo ethi "Harry Potter": ifilimu, abalingisi, izithombe kanye umlando ekudalweni